I-OnePlus 7 iya kutyhila umhla wayo wokungeniswa ngoLwesibini | I-Androidsis
I-OnePlus 7 yenye yeefowuni ekulindeleke kakhulu kule ntwasahlobo. Kancinci kancinci siyazi ngakumbi ngesixhobo. Ndiyazi iveki kuhluzwe into eyayiza kuba ngumhla wakhe wonyulo osemthethweni. Ukongeza, i-CEO yenkampani uyasishiya Sele kukho inkqubela phambili ephezulu. Ngoku, siyazi ukuba usuku lwakho lokufayilisha luya kubhengezwa nini.
Kwakhona, uPete Lau, u-CEO wenkampani, wayejongene nokubhengeza. Utshilo NgoLwesibini sinokulindela iindaba xa i-OnePlus 7 iza kutyhilwa ngokusemthethweni. Kungekudala siza kuba nesiqinisekiso esisemthethweni.
Kwakungenxa yomyalezo kwi-Twitter ngubani oqinisekisile ukuba ngolwesibini siza kuba nalo olu lwazi. Umzuzu abaninzi babelindele, unikezwe ulindelo oluveliswayo ukuya kwi-OnePlus 7. Umbuzo ngowokuba ingaba iya kuba ngumhla wokuboniswa okhutshiweyo kwiveki ephelileyo okanye hayi, kuba yonke into ibonisa ukuba inokuba njalo.
Hlala ubukele uLwesibini olandelayo kwisibhengezo somsitho wethu?
-Pete Lau (@ petelau2007) Aprili 19, 2019
Umzali umzali kulo nyaka bazakulandela iqhinga elifanayo nonyaka ophelileyo. Ke ifowuni iya kuziswa ngokusesikweni phakathi ku-Meyi. Nangona kuya kufuneka silinde isiqinisekiso esivela kwi-CEO ngalo Lwesibini, ukubona ukuba uMeyi 14 ngumhla wokugqibela okhethiweyo.
Ukongeza, kukho omnye ukuthandabuza okukhulu malunga noku. Unikezwe ukuba Asazi ukuba kuya kubakho imodeli enye okanye ezimbini ze-OnePlus 7 eziza kuboniswa. Kwezi veki kubekhona ukuvuza, okukhomba kubukho bemodeli yePro.Nangona umphathi wenkampani engafuni kuthetha nto malunga noku ukuza kuthi ga ngoku.
Ngoko ke Siyathemba ukuba sinedatha ethe kratya kulo Lwesibini. Kuba ubuncinci kuqinisekisiwe ukuba singadibana nini nale OnePlus 7 ngokusemthethweni. Ke siza kusimamela esi sibhengezo kwaye siza kukuxelela yonke into esiyaziyo ngoLwesibini malunga nesiphelo esiphakamileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » NgoLwesibini kuya kubhengezwa xa i-OnePlus 7 izisiwe